Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Ịzụta amụma mkpuchi ahụike? Echefula ihe ise
Site n'ikike nke shutterstock
Ịzụta mkpuchi ahụike bụ otu n'ime mkpebi kacha mkpa na ndụ, ebe ọ na-enyere aka ichebe gị n'oge nsogbu ma na-echebe gị pụọ na ọnụ ahịa na-arịwanye elu nke ụlọ ọgwụ. Ọ bụ nche anwụ gị ịlaghachi azụ mgbe ịchọrọ gị yana ụgbụ nchekwa maka ezinụlọ gị na ihe omume ọjọọ ebe mmadụ chọrọ ịnọ n'ụlọ ọgwụ.
Kedu ihe ị ga -achọ mgbe ị na -ahọrọ amụma ahụike?
Kedu ihe dị mkpa nke atụmatụ mkpuchi ahụike siri ike ga -enye?
Gịnị bụ amụma ahụike ahaziri iche yana gịnị kpatara na ọ bụ nhọrọ kacha mma?
Mana, kedu ka ị ga -esi họrọ otu nke na -enye uru niile ị na -achọ ma na -enye na nkwa ahụ. Kedu ihe ndị ị kwesịrị ịchọ mgbe ị na -ahọrọ amụma ahụike? Ka anyị leba anya n'akụkụ ụfọdụ dị mkpa nke atụmatụ mkpuchi ahụike siri ike ga -enye ka ọ pụta ìhè.
Usoro iwu ahaziri iche
Otu nha dabara nke ọma anaghị ebu oke ibu ma a bịa na amụma ahụike dịka onye ọ bụla nwere mkpa na mkpa dị iche iche. Ezigbo onye na -ahụ maka ịnshọransị ga -eburu n'uche mkpa mmadụ n'otu n'otu wee nye amụma nke ga -egbo mkpa ndị ahụ. Atumatu ahaziri iche ga-enye mgbakwunye dị iche iche nke na-enye mkpuchi mkpuchi dị ka nhọrọ iji nweta ọgwụgwọ na mpụga India, ọnụ ahịa butere n'echiche nke abụọ, n'etiti ndị ọzọ. Yabụ, chọpụta mgbe niile ma ọ bụrụ na a na -enye ụdị uru ahụ ma ọ bụ na ị họrọghị wee họrọ iwu gị otu a.
Ọrụ Ndị Bara Uru
Ọ bụ afọ dijitalụ, ọ dịghịkwa mkpa iburu gị nnukwu akwụkwọ mgbe niile. Chọpụta ma ọ bụrụ na onye na-ahụ maka mkpuchi gị na-enye ọrụ agbakwunyere n'ụdị ngwa nke na-agaghị achọ ka iburu akwụkwọ amụma ahụike gburugburu ma tinye ihe niile nke ọma n'otu ebe enwere ike ịnweta ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla.
Iwu ahụike ọ bụla dị mma naanị ma ọ bụrụ na usoro ịza ajụjụ dị larịị dị ka silk. Na-atụnyere nhazi mmezi nke ndị na-ahụ maka mkpuchi mgbe niile ma naanị depụta aha ndị nwere ndekọ egwu dị ukwuu ma a bịa n'inye usoro mmezi nke enweghị nsogbu. Dị ka ọ dị, nzọ kacha mma gị bụ ịchọta onye nwere ndị otu n'ime ụlọ iji dozie azịza ya n'ihi na ọ na-eme ngwa ngwa yana ọ bụ ebe nkwụsị iji dozie ajụjụ ma ọ bụ hiccups ọ bụla ị na-eche ihu n'oge ụlọ ọgwụ ma ọ bụ mwepụta.
Ọ bụrụ na ị lụrụ di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ na -eme atụmatụ ịlụ di na nwunye n'ọdịnihu, nke a bụ ihe ị kwesịrị ị na -enyocha mgbe niile n'aka onye na -enyocha gị. Ọmụmụ nwa bụ otu n'ime oge kacha mma na ndụ yana ịnwe amụma ahụike na -enye uru ịmụ nwa ga -enyere gị aka ịnụ ụtọ oge kacha mma na ndụ site na ilekọta ụgwọ ụlọ ọgwụ niile na -ahapụ gị ohere ka gị na ndị ezinụlọ gị wepụta oge.
Netwọk Ụlọ Ọgwụ
Ndepụta ụlọ ọgwụ dị na netwọkụ nke onye na -ahụ maka mkpuchi bụ isi ihe dị mkpa ị kwesịrị ịza ajụjụ maka mgbe ịzụrụ amụma ahụike. Lelee ma o nwere ụlọ ọrụ ahụike kachasị na ndekọ aha ya yana kpuchie ụlọ ọgwụ dị nso na mpaghara gị ozugbo ma ọ bụ na enweghị ya. Na -ahọrọ mgbe niile maka amụma ahụike na -ekpuchi ụlọ ọgwụ ebe enwere ike ịkpọrọ ndị ị hụrụ n'anya ma ọ bụrụ na ị nọrọ n'ụlọ ọgwụ na -adịghị mma iji nweta uru enweghị ego. Ọ bụrụ na ụlọ ọgwụ ndị masịrị gị anọghị ndepụta netwọkụ, ị ga-ewepụta ego n'akpa gị wee tinye akwụkwọ maka nkwụghachi ụgwọ ma emechaa nke n'onwe ya nwere ike bụrụ usoro na-eri oge.
Nlekọta ahụike ahụike na -enye amụma echekwara maka ichebe gị na ezinụlọ gị n'oge a nsogbu ahụ ike ma na-echebe gị pụọ na nsogbu ego site na ịnye mkpuchi zuru oke nke na-elekọta mmefu ụlọ ọgwụ niile na-enweghị mkpuchi na mgbazinye ụlọ, mwepu ego, ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ego.
Na agbanyeghị ka ị siri dị mma taa, ka ị na -etolite, chinks na ngwa agha ga -emecha pụta na amụma ahụike bụ ụzọ kacha mma ị ga -echekwaba na ọkwa ndụ. Agbanyeghị, iji nweta uru kachasị na ya, ọ kacha mma ka ị nweta inshọransị n'oge mbido wee nweta mkpuchi dị elu na obere ego.